ဘဝကို အလှပဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြပြီး စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာပြည်မှ LGBTများ
ဘဝကို အလှပဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြပြီး လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာပြည်မှ LGBTများ
29 Jun 2018 . 12:58 PM
LGBT( Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) ကိုလှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သလို တန်းတူအခွင့်အရေးတွေလည်း အရင်ထက်ကိုပိုမိုရရှိလာပြီ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လှပပြီးကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကို ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ကာကြိုးစားနေတဲ့ LGBT တွေထဲကမှ အလှပဂေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ …. မေသစ္စာမောင် ၊ မျိုးကိုကိုစန်း ၊ မထက်(pop soul) ၊ သုသု(ညီညီမောင်) ၊ စစ်ပိုးအိမ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေသစ္စာမောင် ဟာဆိုရင် အသက်အငယ်ဆုံး LGBT အလှမယ်တစ်ယောက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ သူ့ကိုမြင်ရင် မိန်းကလေးတစ်ယောက် လားလို့တောင်ထင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေ ၊ ရုပ်ရည် လှပမှုတွေဟာ ဆိုရင်မိန်းမတွေတောင် လည်ပြန်ငေးရလောက်တဲ့ အလှအပမျိုးပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း လှလှပပနေထိုင်သလို အလှမယ်တစ်ဦး အနေနဲ့ သူရဲ့  ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေထိုင်ပြီး မိတ်ကပ်ကြော်ငြာတွေ ၊ အလှဝတ်စုံ ကြော်ငြာတွေကို တာဝန်ယူ ရိုက်ကူးပေးနေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလှမယ် ပွဲတွေမှာလည်း အခါအားလျော်စွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မေသစ္စာမောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးကိုကိုစန်း ကိုတော့ မသိတဲ့သူခပ်ရှားရှားပါ။ သူကလည်း Transgender အလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခင်မှု ကို အပြည့်အဝရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဆိုရင် ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ကိုကို လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုလှပနူးညံတဲ့ ပုံစံသွင်ပြင် အပြည့်အဝရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ အလှမယ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့လည်း ကြော်ငြာအတွက် အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတွေနဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်း ပြပွဲတွေအတွက် Show လျှောက်ရတာတွေအပြင် တခါတလေမှာလည်း အနုပညာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခြင်းတွေ ကိုပါလုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မသုသု ဆိုပြီး ချစ်စနိုးခေါ် ကြတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပရိသတ်တွေရဲ့  အချစ်တော် သုသု ကတော့အမြဲ ကို လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး အများသူတွေကိုရယ်မောအောင်လုပ်နိုင်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုခေတ်ကြီးမှာလူမှုကွန်ရက် ကို အသုံးများကြတာနဲ့အတူတူ ဒီအရာကြောင့်ပဲနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆိုရင် မမသုကလည်း ပါဝင်လို့နေပါတယ်။ သုသုဟာ သူ့ရဲ့  မျက်နှာပိုင်း ဆိုင်ရာကို အဓိကခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ လူအများရဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်းကိုပိုလို့ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြသူတိုင်း သူ့ရဲ့ အချစ်ရေး ၊ သူ့ရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ ၊ သူ့ရဲ့ ပြောပုံဆိုပုံ တွေကအစ ဂရုစိုက်ကြတဲ့ အတွက် လူမှုကွန်ရက်သုံးသူတိုင်း သူ့အကောင့် ကို Follow ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မမသုဟာဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရပ်ဟာမိတ်ကပ်ပြင်ခြင်းဖြစ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာကြော်ငြာရိုက်ကူးခြင်းတွေ အပြင် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုပါတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
LGBT အလှမယ်နောက်တစ်ဦး ကတော့စစ်ပိုးအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ကြော်ငြာအတွက် ဓါတ်ပုံအလှရိုက်ကူးခြင်းတွေ ကိုလုပ်ဆောင်နေရသလို အင်္ကျီချုပ်တာကလည်း သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အလှအပ ကလည်း ညှို့အားပြင်းပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုလှပတဲ့အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က စစ်ပိုးအိမ်ရဲ့  ပုံ နဲ့ အခုပုံ
လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို အားပေးကြသလို အများကဂရုစိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားခြင်း ကို အပြည့်အဝရရှိထားသူ ဂေးအလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မထက် ကတော့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ဆိုတာ သီးသန့်ရှိပြီးသားပါ။ စကားပြောရာမှာ ချစ်စရာကောင်းသလို သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်တဲ့မိတ်ကပ်ပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အချိန်ကစလို့ပရိသတ်ရဲ့ အသိမှတ်ပြုခြင်းကို ပိုလို့ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပ နဲ့မိတ်ကပ်အကြောင်းတွေ ကိုအခါးအားလျော်စွာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ကနေမျှဝေပြောပြတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှု ကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Ma Htet Facebook၊ Sitt Poe Eain Facebook ၊ Myo Ko Ko San Facebook၊ Nyi Nyi Maung Facebook ၊ May Thitsar Maung Facebook
ဘဝကို အလှပဆုံးပုံဖျောနိုငျခဲ့ကွပွီး လူစိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့မွနျမာပွညျမှ LGBTမြား
LGBT( Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) ကိုလှုပျရှားလုပျဆောငျနပွေီဖွဈသလို တနျးတူအခှငျ့အရေးတှလေညျး အရငျထကျကိုပိုမိုရရှိလာပွီ ဖွဈတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လှပပွီးကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကို ကိုယျတိုငျရပျတညျကာကွိုးစားနတေဲ့ LGBT တှထေဲကမှ အလှပဂေးတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ သူတို့တှကေတော့ …. မသေစ်စာမောငျ ၊ မြိုးကိုကိုစနျး ၊ မထကျ(pop soul) ၊ သုသု(ညီညီမောငျ) ၊ စဈပိုးအိမျ တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
မသေစ်စာမောငျ ဟာဆိုရငျ အသကျအငယျဆုံး LGBT အလှမယျတဈယောကျလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။ သူ့ကိုမွငျရငျ မိနျးကလေးတဈယောကျ လားလို့တောငျထငျရမှာဖွဈပါတယျ။ အသားအရေ ၊ ရုပျရညျ လှပမှုတှဟော ဆိုရငျမိနျးမတှတေောငျ လညျပွနျငေးရလောကျတဲ့ အလှအပမြိုးပါ။
ကိုယျတိုငျလညျး လှလှပပနထေိုငျသလို အလှမယျတဈဦး အနနေဲ့ သူရဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးနထေိုငျပွီး မိတျကပျကွျောငွာတှေ ၊ အလှဝတျစုံ ကွျောငွာတှကေို တာဝနျယူ ရိုကျကူးပေးနသေူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အလှမယျ ပှဲတှမှောလညျး အခါအားလြျောစှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မသေစ်စာမောငျဖွဈပါတယျ။
မြိုးကိုကိုစနျး ကိုတော့ မသိတဲ့သူခပျရှားရှားပါ။ သူကလညျး Transgender အလှမယျတဈဦးဖွဈပွီး ပရိသတျရဲ့ခဈြခငျမှု ကို အပွညျ့အဝရရှိထားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုဆိုရငျ ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ ကိုကို လို့ချေါကွပါတယျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျလိုလှပနူးညံတဲ့ ပုံစံသှငျပွငျ အပွညျ့အဝရှိသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
လိငျအင်ျဂါခှဲစိတျပွုပွငျထားပွီးဖွဈတဲ့ အလှမယျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့လညျး ကွျောငွာအတှကျ အလှဓါတျပုံရိုကျကူးခွငျးတှနေဲ့ ဝတျစုံဒီဇိုငျး ပွပှဲတှအေတှကျ Show လြှောကျရတာတှအေပွငျ တခါတလမှောလညျး အနုပညာလုပျငနျးဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျခွငျးတှေ ကိုပါလုပျဆောငျနသေူတဈဦး လညျးဖွဈပါတယျ။
မသုသု ဆိုပွီး ခဈြစနိုးချေါ ကွတဲ့လူမှုကှနျရကျပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော သုသု ကတော့အမွဲ ကို လနျးဆနျးတကျကွှပွီး အမြားသူတှကေိုရယျမောအောငျလုပျနိုငျသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အခုခတျေကွီးမှာလူမှုကှနျရကျ ကို အသုံးမြားကွတာနဲ့အတူတူ ဒီအရာကွောငျ့ပဲနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှထေဲမှာဆိုရငျ မမသုကလညျး ပါဝငျလို့နပေါတယျ။ သုသုဟာ သူ့ရဲ့ မကျြနှာပိုငျး ဆိုငျရာကို အဓိကခှဲစိတျပွုပွငျပွီးတဲ့နောကျမှာ လူအမြားရဲ့ဂရုစိုကျခွငျးကိုပိုလို့ရရှိခဲ့သူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျ သူ့ကိုစိတျဝငျစားကွသူတိုငျး သူ့ရဲ့အခဈြရေး ၊ သူ့ရဲ့နပေုံထိုငျပုံ ၊ သူ့ရဲ့ပွောပုံဆိုပုံ တှကေအစ ဂရုစိုကျကွတဲ့ အတှကျ လူမှုကှနျရကျသုံးသူတိုငျး သူ့အကောငျ့ ကို Follow ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ မမသုဟာဆိုရငျလညျး သူ့ရဲ့ ကြှမျးကငျြတဲ့ ပညာရပျဟာမိတျကပျပွငျခွငျးဖွဈပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးမှာကွျောငွာရိုကျကူးခွငျးတှေ အပွငျ အနုပညာလုပျငနျးတှကေိုပါတိုးခြဲ့လုပျဆောငျလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
LGBT အလှမယျနောကျတဈဦး ကတော့စဈပိုးအိမျပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး ကွျောငွာအတှကျ ဓါတျပုံအလှရိုကျကူးခွငျးတှေ ကိုလုပျဆောငျနရေသလို အကငြ်္ီခြုပျတာကလညျး သူ့ရဲ့ကြှမျးကငျြတဲ့လုပျငနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့အလှအပ ကလညျး ညှို့အားပွငျးပွီး မိနျးကလေးတဈယောကျလိုလှပတဲ့အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျထားသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ငယျငယျက စဈပိုးအိမျရဲ့ ပုံ နဲ့ အခုပုံ
လူမှုကှနျရကျမှာ တငျထားတဲ့ပုံတှကေို အားပေးကွသလို အမြားကဂရုစိုကျပွီးစိတျဝငျစားခွငျး ကို အပွညျ့အဝရရှိထားသူ ဂေးအလှမယျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
မထကျ ကတော့ သူ့ကိုခဈြတဲ့ပရိသတျဆိုတာ သီးသနျ့ရှိပွီးသားပါ။ စကားပွောရာမှာ ခဈြစရာကောငျးသလို သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျကြှမျးကငျြမှုဖွဈတဲ့မိတျကပျပညာနဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးလုပျဆောငျနသေူတဈဦး လညျးဖွဈပါတယျ။
လိငျအင်ျဂါပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ အခြိနျကစလို့ပရိသတျရဲ့အသိမှတျပွုခွငျးကို ပိုလို့ရရှိခဲ့သူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အလှအပ နဲ့မိတျကပျအကွောငျးတှေ ကိုအခါးအားလြျောစှာ လူမှုကှနျရကျပျေါ ကနမြှေဝပွေောပွတတျသူတဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးထောကျခံမှု ကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။